तपाईंको ईन्टरनेट व्यवसायमा ट्राफिक लक्षित गर्नको लागि अग्रणी सुझावहरू ... | यातायात सम्बद्ध गर्न
लक्ष्यीकरणका लागि अग्रणी सुझावहरू यातायात तपाइँको इन्टर्नेट व्यवसाय मा
तपाईंको आईटमहरू वा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको विज्ञापन बिना, तपाईंको सेवा स्वीकार गरिने छैन र मान्यता बिना, अर्को शब्दमा, दर्शक तपाईंको व्यवसाय मरेका छन्!
अधिक व्यक्ति बढि एफिलिएट मार्केटि !को साथ साइन अप गर्दै छन् जुन भनेको व्यक्तिलाई आइटम प्रमोट गर्ने व्यक्ति या त तपाईंको आफ्नै वा अन्य व्यक्तिको बिक्री वा आयोग बनाउने आशामा!
यस प्रकारको व्यवसायको लागि तपाईले प्रोमोट गर्नु आवश्यक छ, समान एफिलियट मार्केटरहरू र ती सबैका लागि सब भन्दा उत्तम स्थान ट्राफिक एक्सचेन्जहरू, सेफ लिस्टहरू, भाइरल मेलरहरू, र अन्य।
तपाईंको वेबसाइटहरूको प्रचार गर्नका लागि धेरै नै राम्रा दृष्टिकोणहरू छन् जुन हामी कल गर्छौं CoOp विज्ञापन जहाँ तपाइँ क्रेडिटको लागि दिन भर सर्फ गर्न आवश्यक छैन।
धेरै एफिलियट मार्केटरहरूले बक्स बाहिर विश्वास गर्न कोशिस गर्छन् र केहि वास्तव मा आफ्नो निष्कर्ष जारी र विज्ञापन कार्यक्रम को भारी सूची राख्नु छ। त्यस्तै एउटा सूची हो।
के हामीले त्यो स indicate्केत गर्छौं त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जुन चीजहरू स्वामित्त्वको जस्तै छ, क्याम्पि websites वेबसाइटहरू एक ज्वेलरको प्रकारको कम्पनी।
बनाउन एक वेबसाइट त्यो प्रयोगकर्ता मैत्री र आधारभूत हो।
ठीक छ, त्यसोभए तपाईं आफ्नो आगन्तुकहरूलाई साइटमा ग्राफिक्स र एनिमेसनको श्रृंखलाको साथ आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ। मात्र यो लोड गर्न समय लिने छैन तथापि माकुरोले वेबसाइटको माध्यमबाट ब्राउज गर्न चुनौतीपूर्ण रूपमा फेला पार्नेछ। यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एकमा साईन अप गर्नुभयो र तपाईंको मार्केटिंग प्रोजेक्टको साथ शुरू गर्नुभयो भने, तपाईं निश्चित रूपमा अधिक सम्भावित ग्राहकहरू ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ।
लक्षित गर्न साइट ट्राफिक तपाइँलाई सुरुमा झलक को लागी एक थकाऊ लाग्न सक्छ। यदि तपाइँ के गर्ने र कहाँ सुरु गर्ने बुझ्नुहुन्छ भने, कुनै पनि समस्या हुँदैन। अधिक कुशल ईन्टरनेट सेवा को लागी यी सूचकहरुलाई दिमागमा राख्नुहोस्!
तपाईंको वस्तुहरू वा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको विज्ञापन बिना, तपाईंको कम्पनीलाई मान्यता दिईने छैन र मान्यता बिना, अर्को शब्दमा, दर्शक तपाईंको व्यवसाय मरे! धेरै एफिलियट मार्केटरहरूले बक्स बाहिर विश्वास गर्न कोशिस गर्छन् र केहि वास्तव मा आफ्नो निष्कर्ष जारी र विज्ञापन कार्यक्रम को भारी सूची राख्नु छ। ठीक छ, त्यसोभए तपाईं आफ्नो आगन्तुकहरूलाई साइटमा ग्राफिक्स र एनिमेसनको श्रृंखलाको साथ आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं ती मध्ये एकमा साईन अप गर्नुभयो र आफ्नो विज्ञापन प्रोजेक्टको साथ शुरू गर्नुभयो भने, तपाईं पक्कै पनि अझ सम्भव ग्राहकहरू ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ।
साइट ट्राफिक लक्षित गर्नको लागि तपाईंको लागि पहिलो झलकमा केहि श्रमिक हुन सक्छ।